▷ Black Friday amin'ny Apple Watch: ny varotra tsara indrindra | Vaovao iPhone
Ignatius Room | 27/11/2021 08:00 | Nohavaozina amin'ny 27/11/2021 10:20 | Apple Watch
Ny 26 Novambra dia ankalazaina ny Black Friday, iray amin'ireo andro tsara indrindra amin'ny taona mandroso miantsena Krismasy. Raha mikasa ny hanavao ny Apple Watch taloha ianao na hividy ny Apple Watch voalohany, Black Friday no andro tsara indrindra hanaovana izany, satria rehefa manakaiky ny Krismasy dia hiakatra ny vidiny ary tsy ho vita mihitsy ny hahazo tolotra.
Toy ny tamin’ny taona teo aloha, tsy haharitra andro iray fotsiny ny Black Friday, fa haharitra hiitatra izany mandritra ny andro teo aloha, ary ny tolotra voalohany dia hanomboka amin'ny 22 Novambra ary hifarana amin'ny 29 Novambra miaraka amin'ny Black Friday. Mazava ho azy fa ny andro manan-danja indrindra dia hitohy amin'ny faha-26, andro hankalazana amin'ny fomba ofisialy ny Zoma Mainty.
1 Izay modely Apple Watch amidy amin'ny Black Friday
1.1 Apple Watch Series 6
1.3 Apple Watch Series 3
1.4 Apple Watch Series 7
2 Nahoana no mendrika ny mividy Apple Watch amin'ny Black Friday?
3 Ohatrinona ny Apple Watch matetika mihena mandritra ny Black Friday?
4 Hafiriana ny Black Friday amin'ny Apple Watch
5 Aiza no hahitana fifanarahana amin'ny Apple Watch mandritra ny Black Friday
5.3 Fitsarana anglisy
Izay modely Apple Watch amidy amin'ny Black Friday
Apple Watch Series 6 ...
Tolotra TOP Black Friday
Ny Series 6 dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra misy anio raha te hividy Apple Watch ianao. Ny hany maha samy hafa amin'ny Apple Watch Series 7 dia ity modely vaovao ity dia manana haben'ny efijery lehibe kokoa, tsy misy fampiasa vaovao fanampiny.
Miaraka amin'ny fandefasana ny Series 7, ny Series 6 dia lasa safidy tsara indrindra, tsy hoe satria nampihena ny vidiny, fa koa satria tsy hanadino ny fiasan'ny andiany 7 izahay.
JUVEL Mifanaraka amin'ny...
Apple Watch Series 3 ...
Miaraka amin'ny taona iray eny an-tsena dia mahita ny Apple Watch SE, modely izay dia tsy manolotra antsika ireo fiasa mitovy izay hitantsika ao amin'ny Series 6, fa raha endrika misy efijery lehibe kokoa noho ny Series 3.
Ity modely ity dia matetika hita amin'ny tolotra, noho izany tsy ho very mandritra ny fankalazana ny Black Friday.
Apple Watch Series 3 38mm ...
Na dia modely Apple Watch tranainy indrindra aza, natomboka tamin'ny Septambra 2017, Apple dia manohy mivarotra ity fitaovana ity miaraka amin'ny Series 7 sy ny Apple Watch SE.
Miaraka amin'ny fotoana izay efa teny an-tsena, dia tsy ho sarotra ny hahita izany modely amin'ny vidiny mahaliana kokoa, na amin'ny dikan-teny 38 sy 42 mm.
Apple Watch Series 7 ...
Ny Apple Watch Series 7 no taranaka vaovaon'ny Apple Watch, taranaka vaovao efa teny an-tsena nandritra ny herinandro vitsivitsy. Tsy azo inoana izany fa mandritra ny fankalazana ny Black Friday dia mahita tolotra an'ity modely vaovao ity isika izay tsy manolotra fiasa fanampiny amin'ny taranaka teo aloha.
Andramo maimaim-poana ny Audible 30 andro
3 volana amin'ny Amazon Music maimaim-poana
Andramo maimaim-poana 30 andro ny Prime Video
Nahoana no mendrika ny mividy Apple Watch amin'ny Black Friday?
Afaka manamafy izahay, tsy matahotra ny ho diso, fa ny fotoana tsara indrindra hividianana Apple Watch dia mandritra ny Black Friday. Na mandritra ny Black Friday na mandritra ny Krismasy, ny ankamaroan'ny orinasa dia mikasa ny hanary ny tahiry fa manana vokatra tranainy izy ireo mba hanomezana toerana ireo modely vaovao efa misy eny an-tsena na efa ho tonga.
Ankoatra izany, ity fankalazana ity dia mitranga herinandro vitsivitsy aorian'ny fandefasana ny Apple Watch vaovao am-perinasa, noho izany dia tena tsotra mahita tolotra mahaliana ny modely ny taranaka teo aloha. Raha te hividy Apple Watch ianao nefa tsy niteny taminao fotsiny dia mbola manana andro vitsivitsy hanaovana izany ianao.
Ohatrinona ny Apple Watch matetika mihena mandritra ny Black Friday?
Tahaka ny ambiny amin'ireo vokatra navoakan'i Apple teny an-tsena tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, toy ny iPhone 13, ny iPad mini ary ny taranaka faha-7 iPad, dia tadiavo ny modely Apple Watch farany indrindra, ny Series XNUMX, miaraka amina karazana fihenam-bidy. ho mission impossible izany.
Na izany aza, dia ho mora kokoa mahita tolotra mahaliana ao amin'ny Apple Watch Series 6, maodely iray izay, tao anatin'ny herinandro mialoha ny Black Friday, dia nahita fihenam-bidy hatramin'ny 15% izahay, na amin'ny dikan-teny 40mm sy 44mm.
Na dia mbola amidy amin'ny fomba ofisialy amin'ny alàlan'ny Apple aza ny Apple Watch SE, saika hatramin'ny nanombohany dia efa nisy foana izy io vidiny ambany indrindra avy amin'ny Apple ofisialy amin'ny Amazon, miaraka amin'ny fihenam-bidy eo anelanelan'ny 7 sy 12%.
Mikasika ny Apple Watch Series 3, modely efa nahavita 4 taona teo an-tsena, dia ho mTena mora ny mahita tolotra ambany 190 euros, ho an'ny version 42mm, lafo indrindra amin'ny rehetra.
Hafiriana ny Black Friday amin'ny Apple Watch
Araka ny nolazaiko tany am-piandohan'ity lahatsoratra ity dia hankalazaina ny 26 Novambra ny Black Friday. Na izany aza, ary toy ny mahazatra, nanomboka ny alatsinainy 22 novambra ka hatramin’ny 29 novambra, dia ho afaka hahita tolotra isan-karazany ny vokatra, fa tsy Apple Watch ihany.
Na izany aza, ny ankamaroan'ny orinasa ny tolotra tsara indrindra dia voatahiry ho an'ny faha-26. Raha mitady Apple Watch ianao na fitaovana hafa hanararaotra ny Black Friday, dia mety ho hitanao izany mandritra ny Black Friday.
Aiza no hahitana fifanarahana amin'ny Apple Watch mandritra ny Black Friday
Apple tsy mbola ninamana tamin'ny fihenam-bidy izy Na inona na inona karazana, aza manantena hividy Apple Watch amin'ny alàlan'ny Apple Store an-tserasera na any amin'ny fivarotana ara-batana izay ananan'ny orinasa Cupertino manerana an'i Espaina.
Ho an'ny fiantohana sy ny serivisy mpanjifa, Amazon dia iray amin'ireo sehatra tsara indrindra rehefa mividy vokatra Apple, na Apple Watch, iPhone, iPad ...
Ny Apple mihitsy no ao ambadiky ny vokatra Apple rehetra, mendrika ny famerana, izay hitantsika ao amin'ny Amazon, ka hitovy amin'ny mividy izany mivantana amin'ny Apple.
Ao amin'ny tranokalan'ny Mediamarkt, ary koa amin'ny alàlan'ny tranokalany, dia hahita vokatra paoma mangatsiatsiaka, anisan'izany ny Apple Watch sy ny iPhone indrindra indrindra.
El Corte Inglés dia tsy ho diso anjara amin'ny lisitry ny toeram-piasana izay ahafahantsika manao izany mividy ny Apple Watch ary izay vokatra Apple hafa amin'ny vidiny mihoatra noho ny mahaliana.
Raha te hanandrana aloha isika andramo, fiddle, ary fiddle amin'ny Apple Watch-nao Alohan'ny hividianana azy dia afaka mijanona ao amin'ny K-Tuin, fivarotana manokana amin'ny vokatra Apple.
Raha izay no tianao mitahiry vola tsara amin'ny fividianana ny Apple WatchTsy maintsy omenao fahafahana ireo lehilahy ao amin'ny Magnificos, tranokala manokana momba ny vokatra sy kojakoja Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » black friday apple watch
Black Friday amin'ny Mac